Qeybta 1: macruufka VS Android
macruufka waxa si gaar ah oo ku saabsan aaladaha Apple sida iPhone, iPad, iPod-taabashada. Version ugu dambeeyay waa macruufka 8.3 daayay April 2015. nidaamka qalliinka Android oo horumarsan sida il furan by Open dukaamada Alliance, oo ah koox la 84 Shirkadaha ay ka mid yihiin Google, Dell, HTC, Sony, Motorola, Samsung. Version ugu dambaysay ee Android waa 5.1 daayay March 2015.
Waxaan aad u soo bandhigi doona astaamaha labada nidaam ee ka hawlgala oo ha aad go'aansato oo aad rabto in aad isticmaasho la faa'iidada iyo khasaaraha fikradaha ku xiran tahay baahida iyo sifooyinka aad in aad raadinayso ka mid nidaamka qalliinka.
Features macruufka Android
Company Apple, Inc Open dukaamada Alliance / Google
Latest version 8.3 daayay April, 2015 5.1 sii daayay March, 2015
Multi-user No 4.2+
Updates nidaamka Wireless 5+ Haa
Share Market 15.0 boqolkiiba 81.2 boqolkiiba
Raadi codsiyada gudaha duwan ee hal mar Haa Haa
Raadi beeraha oo dhan ah waxyaabaha gudaha 6+ Kaliya beerta raadinta Xiriirada magaca, laakiin aan wax beerta kale
Privacy ee .Wadashaqayntaas Marka degaanka howlan oo aan la isticmaalin iCloud (xajiya xogta baraha) Ma aha suurto gal ah tan iyo markii uu jiro kaliya .Wadashaqayntaas Google (xajiya xogta baraha)
Nidaameed in sirta isgaarsiinta daruurta Haa 2.3.4+
Hagaagsan Desktop Haa No
Local gurmad buuxa Haa, adiga oo isticmaalaya computer dibadda Gurmad Limited u 4.0+ isticmaalaya computer dibadda. Macquulka ah la daadiyo xisbiga 3rd la telefoonada geelaa ama kabashada caado
Kooxaha Contact Software Xisbiga 3- 4+ ama software Xisbiga 3-
Cinwaanada link to maps Haa In Xiriirada, laakiin ma Calendar midna Gmail
Daalacashada heli karaa Major Safari, Chrome ee macruufka, Opera Mini Chrome u Android, Firefox
Taariikhqorihii Call Hortegi karaa iyadoo xayiraad OS, lakiin waa macquul la software xisbiga 3aad ee qalabka jailbroken Hortegi karaa iyadoo xayiraad OS, lakiin waa macquul la firmware Xisbiga 3-
Dalka Chine in kaydinta dibadda dhaqaaq No 2.2+
Qaybta 2. Easy xal: 1 click in xogta wareejiyo ka macruufka in Android
Wondershare MobileTrans waxa loogu adeegsaday xogta ka si phone gudbaayo phone kale sida farriimaha, xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, video iyo barnaamijyadooda. Sidoo kale waxaad dib kartaa ilaa aad iPhone iyo badbaadin xogta aad kombuutarka, tusaale ahaan, iyo ka dib soo celin marka aad rabto. Asal ahaan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in aad si degdeg ah loo wareejin karaa telefoonka ah in qalab kale. IPhone ayaa taageeray by Wondershare Mobile Trans waa iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, iPhone 4s. Sidoo kale, waxaa lagu taageeray on iPad, iPod-taabashada.
Iyadoo Wondershare MobileTrans, kuu soo gudbin karaan dhamaan macluumaadka aad rabto in aad sida xiriirada, sawiro, fariimaha, songs, videos ka iPhone in aad telefoon Acer. Si ay u sii wado, waa inaad marka hore in ay ku xidhmaan qalabka si aad u computer ah. Dhab ahaantii, halkan yihiin dhammaan qalabka iyo qalab aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan xogta habkan loo marayo: aad iPhone, telefoonka Acer, your computer iyo qalab Wondershare Mobile Trans. By tallaabooyinka soo socda ee ka hoos ku qoran, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka mid phone in telefoon kale.
Haddii aadan ka dhigay gurmad ah ee aad iPhone oo badbaadiyey in aad xisaabta iCloud, haatan waa wakhti uu loo sameeyo. Wixii kiiskan si gaar ah waxaad u baahan tahay dib u ka soo iCloud, qalab Android iyo Wondershare MobileTrans qalab. Waa in aad ogaato in aad u isticmaali kartaa habka keliya haddii aad leedahay iPhone la macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8, 9 macruufka iyo qalab Android ordaya 4.2 ama ka dib versions of nidaamka qalliinka android.
Tallaabada 1. Open Wondershare MobileTrans dooro Soo Celinta ka iCloud gurmad hab
Si loo sii wado, waxaad u baahan tahay in la furo Wondershare iyo xisaabtaada iCloud ka dib markii aad soo xulay hab Soo Celinta kaga imaanayo iCloud. Tallaabada xigta waa in ay gasho shubo xisaabta iCloud halkaas oo aad ka arki kartaa oo dhan hayaan sameeyey aad iPhone.
Waxaad awoodi doontaa in aad doorato content in aad rabto in la soo celiyo, sida Xiriirada, fariimaha qoraalka, Apps, Photos iyo waxyaabo kale oo badan. Asal ahaan oo dhan baad u badbaadisay in ilaa dhabarka.
Tallaabada 2. Download gurmad iCloud in aad rabto in lagu wareejiyo qalabka Android aad
Inta lagu guda jiro nidaamka oo dhan, waa in aad leedahay xiriir habboon network si looga fogaado Gaabinta ama xitaa joojinta kala iibsiga xogta. Ka mid ah liiska Dooro gurmad iCloud iyo bilaabaan in ay u soo dejisan.
Dajinta ee aad gurmad iCloud waxaa si degdeg ah laga bilaabo, laakiin waa in aad sugtaa waqti yar ilaa habkan loo sameeyo.
Tallaabada 3. Transfer aad raalli ka iCloud in qalab Android aad
Waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab Android caga aad dib dajinta la dhammeeyo. Waxaad arki doontaa wax content oo dhan oo aad ka hubin kartaa waxyaabaha aad doonayso in aad soo celiyo qalabka Android aad. Talaabada ugu dambaysa waa in riix badhanka Start Copy on.
Qaybta 3. Poll: Ma waxaad tahay qof an macruufka ama Android user?
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Android Phones